PASKA FAMONANA PLASTIKA - FITEHIRIZAM-BOKIN'NY, TRENDS, ARY VOAFITSARANA (2020 - 2025)
Ny tsenan'ny fonosana plastika dia nitentina USD 345,91 miliara tamin'ny taona 2019 ary antenaina hahatratra ny sandan'ny USD 426,47 miliara amin'ny 2025, amin'ny CAGR 3,47% mandritra ny vanim-potoana namboarina, 2020-2025. Raha ampitahaina amin'ny vokatra fonosana hafa, ny mpanjifa dia nampiseho fironana mitombo amin'ny packagi plastika ...Hamaky bebe kokoa »
Fanavaozana ny fonosana 2019: ny plastika dia miatrika ireo mpifaninana amin'ny fibre
9 Sep 2019 - Ny fitomboan'ny fitohizan'ny tontolo iainana amin'ny famonosana entana dia nanjary lohahevitra lehibe tao amin'ny Packaging Innovations any London, UK. Ny ahiahy manokana sy ny besinimaro amin'ny fiakaran'ny vidin'ny plastika manerantany dia nahatonga ny hetsika mifehy, miaraka amin'ny governemanta UK izay ...Hamaky bebe kokoa »
Ny plastika dia fitaovana misy ny fitambarana karazana synthetic na semi-synthetic organika azo zahana ary azo ahodina ho zavatra mafy. Ny plastika dia fananana amin'ny ankapobeny amin'ny fitaovana rehetra izay mety hiova endrika tsy azo ivalozana nefa tsy manapotika fa, ao amin'ny kilasy polym miova ...Hamaky bebe kokoa »
Fironana fonosana plastika 2020
Ny Eveka Chroma Color dia miresaka momba ny fomba fijeriny momba ny fironana lehibe hodinihina amin'ny famolavolana fonosana plastika mandroso. Izaho sy ny mpiara-miasa amiko dia nitatitra momba ny faharetana sy ny ezaka natao ho an'ny indostria toekarena boribory, anisan'izany ny akora ary ampiana .. .Hamaky bebe kokoa »
Famerenana indray ny fonosana plastika - mankany amin'ny toekarena boribory
Fonosana plastika: olana iray mitombo mampihena, mampiasa indray, manamboatra indray 9% Ny fonosana plastika manerantany dia voahodina ankehitriny. Isaky ny minitra mitovy amin'ny kamio fako iray mamoaka rano mankao anaty renirano sy renirano, miafara any amin'ny ranomasina. Tombanana ho 100 tapitrisa ny biby an-dranomasina maty isan-taona du ...Hamaky bebe kokoa »
Ny fiantraikan'ny hetsika maimaim-poana amin'ny plastika amin'ny fonosana sy ny famolavolana vokatra
Ahoana ny fiantraikan'ny fihetsiketsehana maimaim-poana amin'ny plastika sy ny famolavolana vokatra ary ny famolavolana vokatra dia tsy miankina amin'ny mpanjifa araka ny ahalalantsika azy. Jereo hoe amin'ny fomba ahoana ny hetsika tsy misy plastika dia mamorona fiovana amin'ny fomba fisehoana, fanaovana ary fanariana ny vokatra. Isaky ny miditra amin'ny fivarotana ianao ...Hamaky bebe kokoa »
Topimaso momba ny fanodinana plastika
Ny fanodinana plastika dia manondro ny dingan'ny famerenana amin'ny laoniny ny fako na ny plastika ary ny fanodinana ireo fitaovana ho vokatra azo ampiasaina sy ilaina. Ity hetsika ity dia fantatra amin'ny hoe dingana fanodinana plastika. Ny tanjon'ny fanodinana plastika dia ny fampihenana ny tahan'ny fandotoana plastika avo lenta ary hametrahana p ...Hamaky bebe kokoa »